I-activated charcoal yokuhlanzwa komzimba
Ukukhathazeka okukhulu kwabantu mayelana nesimo sempilo yomzimba kuholele ekutheni ama-sorbents aqala ukudlala indima ebalulekile ekuphulukisweni.
I-sorbent yilapho ithatha izinto, i-gases nama-vapor emvelo. Ngokungcoliswa kwemvelo nokunyuka kwemikhiqizo engaphansi kwemashalofini ezitolo, kanye nokuthandwa kwezidakamizwa, odokotela bafika emcabangweni wokuthi umzimba udinga ukuhlanzwa ngezikhathi ezithile. Izinto eziningi ezinobungozi zinendawo yokuqoqa emzimbeni, kodwa ngokwabo azikwazi ukuhlanzwa njalo nge-toxin.
Ngokwezinga elikhulu lokhu kuhambelana neqiniso - umbuso ongalungile wosuku nokudla, ukusebenzisa izinto ezilimazayo kuye kwaholela ekubeni abantu baqhubeka bekhononda ngezifo. Futhi uma ngaphambi kokuba iziphuzo zisetshenziswe kuphela ezimweni ezimbi - ngesifo sohudo nesifo sobuthi, namuhla zisetshenziselwa ukubusa kwamathumbu nesibindi.
Ukuhlanza umzimba ngamachiza acushiwe kuyathandwa namuhla. I-carbon esebenzayo iyisidakamizwa esilula futhi esingabizi, ngokungafani nemifanekiso yaso - amalahle amhlophe, uLiferan no-Enterosgel. Abanye bakholelwa ukuthi lezi zintandokazi zikwazi kangcono ukubhekana nomsebenzi kunokwenziwa kwekhabhoni, kodwa ngokuvamile ezimweni ezilula asikho isidingo sokuthatha izinkohliso ezinamandla kunamalahle.
Ukuhlanza nge-activated carbon kubonakala ngendlela yokwenza izikhangiso - ithola izinto eziyingozi ngaphansi kwayo, ngakho-ke kufanele ithathwe ngobuningi. Amalahle asebenzayo aqinisa ubuthi, uwaqoqe ebusweni bomathumbu, agxila, bese kuthi, kanye nezinto eziyingozi, isuswa emzimbeni ngokwemvelo.
Ukuhlanza amathumba ngamachiza acushiwe
Amathumbu ingenye yezitho ezibaluleke kakhulu, ngokuphambene nemibono evunyelwe ngokuvamile, ngoba ukuzivikela kanye "nokuhlanzeka" kwenyama kuncike esimweni sayo. Emathunjini, ukuqoqwa kwe-toxins, okuye kwagonywa futhi kuqondiswa ezinye izinhlelo ukuthi zenzeke.
Akuzona zonke lezi zinto ezikhishwa ngempumelelo ngaso sonke isikhathi, ngoba ukwephulwa kwe-microflora yamathumbu (ukoloni lwayo ngamabhaktheriya "okuwusizo") kubonakala kubantu njalo. Isitha esikhulu samathumbu emathumbu emathumbu amathumbu ama-antibiotic abhubhisa amabhaktheriya ngaphandle kokuhlukaniswa, kungakhathaliseki ukuthi ayasiza noma ayingozi, futhi ukucindezeleka nokudla okunomsoco kunomthelela ekuphazamiseni i-microflora yamathumbu.
Lapho i-microflora yayo iphazamiseka, lokhu kuholela eqinisweni lokuthi amakhemikhali atholakala emathunjini futhi apheliswe ngokuphelele. Ziwutshisa umzimba wonke futhi ziholele ekutheni zifakwe emzimbeni , zivikeleke ekuziphatheni komzimba kanye nokucindezeleka okuvamile. Kulesi simo, umzimba udinga ukuwasiza, futhi ngawo, ungakhohlwa mayelana ne-microflora.
Njengoba ama-sorbents ephula i-microflora yamathumbu, okokuqala, ukuhlanza umzimba uthathe izifundo eziningana, bese uphuza ama-probiotics.
Ukuhlanza isibindi ngamachiza acushiwe
Ukuhlanza isibindi ngamalahle asetshenzisiwe kuyahluka kancane ekuhlanjuleni amathumbu. Lokhu kungenxa yokuthi amaphilisi afaka uhlobo olulodwa lokuphatha futhi anomthelela owodwa emzimbeni. Ngakho-ke, ngokuhlanza amathumbu ngamachiza acushiwe, ngeke nje kuhlanzwe.
I-charcoal esebenzayo iyosiza isibindi ukuba sikhulise izinga le-bilirubin futhi sibophe i-bile acid esiswini, okuyoba nomphumela omuhle emsebenzini wesibindi.
Ukuhlanza umzimba nge-activated carbon - dosage
I-unit unit ye-carbon esebenzayo akufanele idluliswe ngesilinganiso se-tablet eyodwa ngayinye ye-10 kg yesisindo.
Ngosuku lokuqala, i-dose eshaqisayo ithathwa ebusuku. Ngosuku olulandelayo, amaphilisi amabili athathwa phakathi kokudla.
I-activated charcoal isetshenziswe ekuseni kusenalutho esingenalutho futhi kusihlwa ngaphambi kokulala, ukugeza ngamanzi amaningi ngesilinganiso sethebulethi elilodwa nge-10 kg yesisindo. Lolu hlelo kufanele luqhutshwe kungakapheli izinsuku ezingu-10.
Ngemuva kohlelo lwezinsuku ezingu-10, udinga ukuthatha ikhefu - amasonto angu-1-2, bese uphinda futhi. Ngemuva kwesikole sesibili, thatha ama-probiotics ukubuyisela i-microflora.
Ukuhlanza umzimba nge-carbon-contraindications esebenziwe
I-activated carbon ayikwazi ukuthathwa uma:
izifo ezingokwemvelo zendlela yokugaya ukudla;
isisu sesilonda ;
Ukuqokwa - yini okufanele uyenze ekhaya?
I-virus entsha ye-influenza 2014 - izimpawu
Ukwelashwa kokulala nokulashwa kwabantu
Isilonda esiswini - izimpawu, ukwelashwa
Lakopenia - izimpawu
Yini ongayinika intombazane engama-6 ubudala?
Polyuria - izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Ungayithola kanjani isikhathi emuva?
I-pseudotuberculosis - izimpawu
Iyini inja efile ebonakala?
Anita Lutsenko, kanjani ukuhlanza isisu?
Isobho nge pasta namazambane
Omelet ku-oven microwave
Ukusuka kwamanzi kwabesifazane
Yiluhlobo luni lwezindawo ezingcono kakhulu ekudleni okude?
Indlela yokufundisa ingane ukuthi ifunde kanjani lokho akufundayo?
I-Mombasa - amahhotela
Izifo zesibindi - izimpawu, ukwelashwa
Indlela yokuphatha snot eluhlaza enganeni?
Ithiphu yosuku: izimfihlo ezingu-12 zokuhlanza okusheshayo kwezithelo zakho ozithandayo